Adeegyada Our - Tianjin Goldensun Steel Co., Ltd.
Waxaan soo dhawaynaynaa iibsada iman kara in ay nala soo xiriir.
Taageerada email goldensun001@goldensunsteel.com
waxaan ku jirase aad
SHAQADA BARNAAMIJKA URURKA
Guushu bir Light
EEG Dhammaan qeybaha
wax soo saarka kasta waxaa si taxadar leh u sameeyey, waxaa ka dhigi doonaa in aad ku qanacsan. waxyaabaha Our in habka wax soo saarka ah ayaa lagu helay in si adag loola socdo, maxaa yeelay waxa ay tahay oo kaliya inay ku siiyaan tayada ugu fiican, waxaan dareemayaa kalsooni. kharashka wax soo saarka sare, laakiin qiimaha yar yahay our iskaashiga mudada dheer.
macaamiisha waaweyn ee dunida
15 sano soo saarta waayo-aragnimo tan iyo 2005, 12 sano waayo-aragnimo xirfadeed dhoofinta tan iyo 2007. Dhigtay 48 bandhigyo gudaha iyo dibadda wada shaqeyn la leh macaamiisha badan oo si raxmad leh. Iyo dhoofinta in ka badan 60 dal, Southeast Asia, Bariga Dhexe, Afrika ayaa, Bartamaha iyo Koonfurta America gobolka iwm
Waxaan aad dhawrtid stock iyo wax soosaar cusub sannadka oo dhan, sidaa darteed mar kasta oo aad ka dhigi amar aan xaqiijin doonaa waqtiga dhalmada. Dhanka kale, wuxuu dhawri doonaa tayada sareeya iyadoo aan loo eegayn in wax soo saarka ama kaydka.
Waxaan rajaynaynaa in ay iskaashi la macaamiisha dheeraad ah horumarinta iyo labada dhinac.